Xarunta Levamisole bolusdose 3400mg - Shiinaha Chongqing Fangtong
BARCLEAN (Xarunta Sulfamonomethoxine Sodium duritaanka)
Xarunta 3400mg bolusdose Levamisole
TIRADA bolusdose kasta waxa ku jira Levamisole HCL 2000mg iyo Oxyclozanide 1400mg. LEVAOXYNIDE SHARAXA waa kiniin pink ah midab for kacmaha afka. Muujinaya LEVAOXYNIDE waa anthelmintic a spectrum ballaadhan loogu isticmaalo daaweynta iyo la socodka ee calool-iyo pulmonary nematode. Infections iyo fascioliasis chronic ee xoolaha. -Lungworms: Dictyocaulus spp. Gooryaanka -Gastro-xiidmaha: Haemonchus spp, Ostertagia spp.. (Marka laga reebo dirxiga Ostertagia xanniban tahey xoolaha), Nematodirus spp., Tricho ...
bolusdose kasta waxa ku jira Levamisole HCL 2000mg iyo Oxyclozanide 1400mg.
LEVAOXYNIDE waa kiniin pink ah midab for kacmaha afka.
LEVAOXYNIDE waa anthelmintic a spectrum ballaadhan loogu isticmaalo daaweynta iyo la socodka ee calool-iyo pulmonary nematode. Infections iyo fascioliasis chronic ee xoolaha.??
Gooryaanka -Gastro-xiidmaha: Haemonchus spp, Ostertagia spp.. (marka laga reebo dirxiga Ostertagia xanniban tahey xoolaha), Nematodirus spp, Trichostron -.. spp gylus, spp cooperia, Oesophagostomum spp, Bunostomum spp...
LEVAOXYNIDE sidoo kale ka saaraysaa spp Fasciola ugu waaweyn., (Flukes) ku sugan koollo bile beerka ah.
Levamisole waa laevo-enantiomer of tetramisole iyo waa imidazothiazole ah anthelmintic. Waa wax ku ool ah ku dul maamulka afka ka dhanka ah noocyada kala duwan ee nematodes. Its tallaabo anthelmintic waxa lagu gartaa curyaannimo ee dixiri dhex Iscelin ah muruqyada nooca depolarising ah, taasoo keentay in tirtiridda dadban ee dixiri.
Oxyclozanide waa anthelmintic ah oo ka tirsan kooxda salicylanilide ah. Waa wax ku ool ka dhanka ah noocyada Fasciola, ku simaha sida uncoupler ah phosphorylation murqo. Waxay u dhaqmi karaan wax ka badan hal site yaraadaan heerarka ATP taasoo keentay in cillad dheefshiidka iyo dhimashada ee noole ah.
Levamisole waxaa aad si degdeg ah u nuugo oo ay isugu soo urureen plasma peak waxaa gaadhin celcelis 1 to3 saacadood ka dib kacmaha afka. Levamisole si degdeg ah dhammaan u wada qaybiyeen unugyada, halkaas oo heerarka dhowr jeer ka badan heerarka plasma u dhiganta. Tirtiridda ka plasma iyo unugyada sidoo kale waa mid aad u deg deg ah, marinnada ugu muhiimsan ee laga reebay in ay kaadida iyo bile ah.
Oxyclozanide si tartiib ah nuugo ka dib markii maamulka afka leh heerar plasma ugu sarreysa 24 saacadood ka dib kacmaha. Digo waa badan saxarada, Digo biliary isagoo wadada ugu muhiimsan ee laga reebay.
1 bolusdose halkii miisaanka jidhka 250-300kg.
keeni kartaa mararka qaarkood shuban, inappetence, frothing, dhareerka iyo cidhiidhi neefsashada.
- Waayo, daaweynta xoolaha oo keliya
- Ka fogee tiigsiga caruurta.
Maalmood -3 caanaha.
-28 maalmood cuno hilibka.
Ku kaydi meel qabow oo qalalan oo mugdi ka hooseeya 30 ℃.
5 Boli X 12 strips / Box.
Next: Xarunta la ogaaday kiniiniyada
10% Levamisole HCL duritaanka
7.5% 10% Levamisole HCL duritaanka
GMP Levamisole HCL duritaanka
Levamisole + Oxyclozanide Cayrin
Levamisole HCL 10% duritaanka
Levamisole HCL 10% saaraha duritaanka
Levamisole HCL bolusdose / Tablet
Levamisole HCL duritaanka
Levamisole HCL duritaanka 5%
Levamisole HCL duritaanka Waayo Xoolaha
10% Veterinary Levamisole HCL duritaanka
Veterinary Levamisole HCL duritaanka